Progressive Voice Myanmar »7September 2021
Coup Update 93 Views
September 7th, 2021 • Author: • 1 minute read
Reporters Without Borders/ Myanmar reporter arrested in Yangon after four months in hiding
Human Rights Foundation of Monland, Kachin Women’s Association Thailand, Karen Human Rights Group, Karen Peace Support Network, Karen Women’s Organization, Karenni Civil Society Network, Karenni National Women’s Organization, Pa-O Women’s Union, Progressive Voice and Ta’ang Women’s Organization/ Myanmar needsa‘do no harm’ solidarity-based approach to humanitarian aid/ Report
National Unity Government of Myanmar/ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမိန့်ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၁) – “အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာခြင်း”
National Unity Government of Myanmar/ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမိန့်ညွှန်ကြားချက် အမှတ်(၁/၂၀၂၁) – “ရက်အကန့်အသတ်မရှိ အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း”
Ministry of Defence – National Unity Government of Myanmar/ Directive to People’s Defence Forces (PDFs), Local Defence Forces (LDFs) and Special Task Forces (STFs) – Directive No. 3/2021/ Burmese version.
National Unity Government of Myanmar/ Acting President of the National Unity Government of Myanmar, Duwa Lashi La’s Emergency Speech to the Public on Current Military Crisis/ Burmese version.
Karenni State Consultative Council/ တင်ဒါယူ ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းများအား ရပ်ဆိုင်းထားရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း
Ministry of Defence – National Unity Government of Myanmar/ တောင်ငူခရိုင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အရေးပေါ် ကြေညာခြင်း
People’s Defense Force – TSG/ PDF-TSG ၏ ပြည်သူသို့အရေးပေါ်ကြေညာချက်
People’s Administration of Kanpetlet/ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကန်ပက်လက်မြို့ ၏ အရေးပေါ်ကာလထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Karenni Nationalities Defense Force/ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
Karenni Nationalities Defense Force/ KNDF ၏ တိုက်ပွဲအခြေအနေထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့။)
AAPP/ Daily Briefing in Relation to the Military Coup for7September 2021